Ciidamo Katirsan Maamulka Koonfur Galbeed oo ku dhintay Duleedka Baydhabo.
Wednesday March 13, 2019 - 16:31:30 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya qarax maleeshiyaad katirsan maamulka isku magaacaabay Koonfur galbeed lagula beegsaday deegaan katirsan gobolka Baay.
Wararka ka imaanaya deegaanka Goofguduud Buureey oo qiyaastii 30Km ujira magaalada Baydhabo ayaa sheegaya in ugu yaraan 7 askari ay ku dhinteen qarax miino oo ciidamada Koonfur galbeed lagula eegtay goob isku imaatin ah.
Dadka deegaanka aya sheegay in qaraxu uu sababay dhimasho iyo dhaawac farabadan oo gaaray ciidamadii ku sugaa goobta isku imaatinka ah waxaana loo badinayaa in qaraxani uu ka dhashay miino dhulka lagu aasay.
Wararka ayaa intaas ku daraya in markii uu qaraxu dhacay kadib ay ciidamada maamulka Koonfur galbeed ay rasaas ku fureen suuqa xoolaha lagu iibiyo ee deegaanka Goof Guduud buuray waxaana rasaastaas ku dhaawacmay dad shacab ah.
Madaxweynaha 'Koonfur Galbeed' Oo Xaqiiijiyay in Al Shabaab ay ka dishay Sarkaal muhiim u ahaa Maamulkiisa.
Mas'uul Katirsan Maamulka 'Koonfur Galbeed' oo ku dhintay Qarax ka dhacay Gobolka Baay.
Taliyihii Ciidanka Sirdoonka degmada Garbahaarey oo ku dhintay Dagaal ka dhacay Gobolka Gedo [Warbixin].
Al Shabaab iyo 'Jubbaland' oo ku dagaallamay duleedka Degmada Garbahaareey.
Ciidamo Itoobiyaan ah oo lagu qarxiyay Deegaanka Halgan ee Gobolka Hiiraan.
8 Askari AMISOM ah oo ku dhintay Qarax ka dhacay duleedka Muqdisho.
Talibaan oo la wareegtay Magaalo Muhiim ah oo katirsan Wadanka Afghanistan.
Dagaallo Ka Dhacay degmda Afmadoow iyo deegaanno katirsan Sh/Hoose.
Weeraro hubeysan oo lagu qaaday Saldhigyo ku yaal duleedka Kismaayo.